धनगढी पुगेका राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष केसीको प्रश्न, रिन काढेर घिउ पिउने हो ? – Sodhpatra
प्रकाशित : २० आश्विन २०७८, बुधबार २०:५८ October 6, 2021
धनगढी : संघीयता खारेजी लगायतका माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशले धनगढीमा प्रदर्शन गरेको छ ।
बुधवार राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको प्रमुख आतिथ्यमा धनगढीको ट्राफिक चौराहा देखी पार्क मोड सम्म गणतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ संघीयता खारेज गरौँ, एमसीसी, भ्रष्टाचार, महँगीका विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ भन्ने नारा सहित विरोध र्‍यालीको आयोजना गरिएको हो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिद्वारा आयोजित उक्त रयाली पार्क मोडमा सम्बोधन सभामा परिणत भएको थियो । सो क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सम्बोधन गर्दै संघीयताको भार नेपाली जनताको टाउकोमा थुप्रिँदै गएको बताउनु भयो ।
उहाँले, ”यो संघियताले गर्दा नेपाली जनता साह्रै चिढिएको छ । संघीयताको भार नेपाली जनताको टाउकोमा बढिरहेको छ । नेपाली जनता सँग रोजगारी छैन, बिरामी हुँदा औषधि छैन । अन्याय हुँदा न्याय पाउन घुस खुवाउन पैसा छैन । यस्तो बेला नेपाली जनताका आवश्यकता छोडेर पनि नेपाली जनताले सात, सात ठाउँमा सात प्रदेशमा सांसद पाल्नु परिरहेको छ । सात ठाउँमा मन्त्रीमण्डल पाल्नु परेको छ । प्रदेश पति पाल्नु परेको छ । कति खर्च लाग्छ ? यस्तो भिक मगा मुलुकले, चाडबाडको मतलब नगरी विदेश गएका युवाले पठाएको रेमिटेन्सबाट चल्ने देशले यत्रा मन्त्री हरू तिनले लिने सेवा सुविधाहरू दिन सम्भव छ ? रिन काढेर घिउ पिउने हो ?” भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।